October 2, 2020 – မြန်မာသတင်းစုံ
သရုပ်ဆောင် နန္ဒလှိုင်နဲ့ မောင် တို့မိသားစုအတွက် ဝမ်းသာစရာနေ့လေး တစ်ရက်😊
သရုပ်ဆောင် နန္ဒလှိုင်နဲ့ မောင် တို့မိသားစုအတွက် ဝမ်းသာစရာနေ့လေး တစ်ရက်😊 …………အကုန်သိသတင်းဌာန ……….. ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ကတော့ သရုပ် ဆောင် နန္ဒလှိုင်နဲ့ မောင်တို့မိသားစုအတွက် ဝမ်းသာစရာ နေ့ရက်လေး တစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် နန္ဒလှိုင်နဲ့ မောင် တို့ရဲ့ တူလေးနဲ့အဖွား ကိုဗစ် Negative မို့ အိမ်ပြန်ခွင့် ရခဲ့ပြီဖြစ်သလို ညီမဖြစ်သူ နွေးနွေးလှိုင်လည်း ဆေးရုံကနေ ဆင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ ” Negative ဖြစ်ပြီးလို့ ပထမဆုံး အိမ်ပြန်ရသူလေး။ ကလေးဆိုတော့ ၁၄ ရက် အခန်းထဲပိတ်နေရတာကို သူတော်တော်ပျင်းရှာတာ။ ဒီနေ့တော့ သူပျော်တာ ပျော်တာဆိုတာ😃 အပြင်ရောက်ရောက်ချင်း မောင်နှမတွေကို တွေ့ချင်တယ်ဆိုပြီး ကန်ရိပ်သာ အိမ်ကိုအရင်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တယ်💖 ဝမ်းသာရတဲ့ နေ့လေးပါ ” လို့ […]
Posted on October 2, 2020 Author admin	Comments Off on သရုပ်ဆောင် နန္ဒလှိုင်နဲ့ မောင် တို့မိသားစုအတွက် ဝမ်းသာစရာနေ့လေး တစ်ရက်😊
လတျတလော လူမှုကှနျရကျမှာ ဝဖေနျမှုမြားစှာ ခံနရေတဲ့ ဖိနပျကွျောငွာတခုနဲ့ ပတျသကျပွီး ပရိသတျမြားရဲ့ ပွောဆို ဝဖေနျမှုတှကေို တာဝနျအရ ခံယူသှားမယျလို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ လူရှငျတျော ဧရာက ဧရာဝတီကို ပွောပါတယျ။ “ကွျောငွာ ရိုကျက ယုနျလေးနဲ့ ရိုကျထားတာပွီးပွီ။ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒါကိုလညျး ပွောကွဆိုကွ ဝဖေနျကွတယျလို့ ကွားပါတယျ။ ကနြျောတို့ကတော့ ကနြျောတို့အလုပျ ကနြျောတို့ လုပျလိုကျတာပါပဲ။ စငျပျေါမှာလညျး ဒီလိုပွကျလုံးတှေ ပွကျခဲ့ရတာပါပဲ။ မိနျးမကို ကွညျ့ပွီး ငမျးတာပေါ့။ ရုပျရှငျတှထေဲလညျး ရိုကျကွရတာပါပဲ။ တာဝနျ မရှိဘူးလို့ မပွောပါဘူး။ တာဝနျအရ ပွောကွ ဆိုကွပါစေ။ ခံမယျ။ ကွိုကျသလောကျ ဝဖေနျကွပါ။ ခံပါမယျ၊ ဒါပါပဲ” လို့ လူရှငျတျော ဧရာက ပွောပါတယျ။ ဒီကွျောငွာမှာတော့ သူပါဝငျသရုပျဆောငျရမယျ့ နရောတခုကိုသာ […]
Posted on October 2, 2020 Author admin	Comments Off on ဝဖေနျမှုတှကေို တာဝနျအရ ခံယူသှားမယျ လို့ လူရှငျတျော ဧရာ ပွေ
နေအိမ် ၉ထပ်ပေါ် မှမတော်တဆ ပြုတ်ကျပြီး အသက်ဆုံး ရှုံးခဲ့ရသည့် မိုင် Sui hldi tial
နေအိမ် ၉ထပ်ပေါ် မှမတော်တဆ ပြုတ်ကျပြီး အသက်ဆုံး ရှုံးခဲ့ရသည့် မိုင် Sui hldi tial ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်မြို့အမှတ်(၂)-ရက်ကွက်တွင်နေထိုင်သူ မလေးရှားနိူင်ငံ စလန်းကောပြည်နယ် ဆွန်ကိုင်းဘလို့မြို့တွင်နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သော (Mai Sui Hldi Tial) အသက်(၂၁) 29.9. 2020-ရက်နေ့တွင် နေအိမ်(၉)ထပ်မှ အက်စီးဒင့်ဖြစ်ကာ ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည် ။ ကျန်ရစ်သော ခန္ဓာကိုယ်ကို 2.10. 2020-ရက်နေ့တွင် ဆွန်ကိုင်းဘလို့ဆေးရုံကြီးမှသယ်ဆောင်ကာ လိုအပ်သည်များကိုပြုပြင်ပြီး ညနေ(၄)-နာရီ အချိန်တွင် ကာချမ်းဆေးရုံကြီးတွင်ဘုရားသခင်ထံ၌ဆုတောင်းပွဲကျင်း ပပြီး ( K. L. I. A) လေဆိပ်သို့သယ်ဆောင်ပြီး မလေးရှားလေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် မိသားစုများစောင့်မျှော်နေသော ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်မည်ဟု သိရှိရပါသည် ။ #Hein Htet Wai
Posted on October 2, 2020 Author admin	Comments Off on နေအိမ် ၉ထပ်ပေါ် မှမတော်တဆ ပြုတ်ကျပြီး အသက်ဆုံး ရှုံးခဲ့ရသည့် မိုင် Sui hldi tial